Ambohidrapeto : jiolahy dimy nitondra Kalachnikov nanafika « bar » | NewsMada
Ambohidrapeto : jiolahy dimy nitondra Kalachnikov nanafika « bar »
Fanafihan-jiolahy mitam-piadiana iray indray no tsy tanteraka hatramin’ny farany ny 18 desambra teo, tamin’ny 7 ora hariva sy 45 minitra tao amin’ny fokontany Antanetibe Ambohidrapeto, distrika Antananarivo Atsimondrano, noho ny fahatongavana ara-potoan’ireo zandary mpanao fisafoana amin’ny alina.
Niditra tao amin’ny tranon’olona iray mpivarotra toaka ny jiolahy miisa dimy nirongo basy Kalacknikov. Nanapoaka basy izy ireo ary nokapohiny tamin’ny hazo ny lohan’ny tompon-trano ka naratra mba hanereny azy ireo hamoaka ny vola tao an-trano. « Nandre izany poa-basy izany ireo zandary avy ao amin’ny borigady Itaosy izay efa teo am-panaovana fisafoana amin’ny alina teny amin’ny manodidina tsy lavitra ny toerana voatafika ka nanatona hamonjy. Misy anefa tamin’ireo jiolahy tsy nanao afa-tsy ny nitsikilo ny mety ho fiavian’ny mpitandro filaminana ka nanaitra ireo namany handositra », hoy ny zandary. Tafaporitsaka, noho izany, ireto olon-dratsy ireto ka tsy nahazo na inona na inona. Natao ny fikarohana, saingy efa tsy hita izy ireo. Mbola notohizana hatrany anefa ny fikaroham-baovao momba azy ireo.
Manamafy ny fisafoana ho fisorohana ny asa ratsin’ireo jiolahy ny zandarimariam-pirenena indrindra amin’ny vanim-potoana ankatoky ny fety toy izao. “Ny fizaran’ny mponina amin’izy ireo ny vaovao haingana amin’ny tranga rehetra mety mampiahiahy no vahaolana tsara indrindra amin’izany satria iombonana ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana na efa maro aza ireo zandary ireo no miparitaka misafo tanàna toy ny tamin’ity tranga ity”, hoy ny zandary.